Iintlobo zoyilo lwegraphic | Creatives Online
El ukuyila sisisombululo esikhathalayo malunga nokusetyenziswa komfanekiso en el kwinkampuo de la kawonke wonkeinto, la edsakhlweivuliwe y la iplaniukubaAngleivuliwe de la yazisaAngleivuliwe. Se pesentira en la imoa en que se trukhokho el Qhubekaenumkile de la yazisaAngleivuliwe nge el iphiko de que el mngokoaje pueda ukuba yomzaliisipheloumkile apropiadamente yi el usuArio. Yiyo loo nto kukho iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lwegraphic ukwenza yonke le nkqubo.
Le ndawo i muy amplio en el que ngaphantsiemos ncbayerar una gran ezahlukeneyoad de utitshalaesionyi. Njengo, Kubalulekile ukwazi ukuba zeziphi iintlobo zabayili begraphic ezikhoyo. En Esta seccivuliwe te vamos a comyomzaliar ezona ziphambilis iintlobo zoyilo lwegraphic que ngaphantsiemos ncbayerar en el Wed.okwishumi elivisayo. ukuba que así, SEPas cuál es la que mejor se zi lungelea a tu nganyewire.
2 Loluphi uhlobo loyilo lwegraphic olukhoyo?
2.1 Uyilo lomhleli
2.2 Uyilo lwentengiso
2.3 Uyilo loShishino
2.6 Uyilo lwe-3D
2.7 Uyilo lwewebhu
¿Qué es el isifohayi gráfico?
El isifohayi gráfico es el iseti yemisebenzi evumela ukuveliswa kwenkqubo yemizobo ehlangabezana neemfuno zabathengi. Isetyenziselwa ukusasaza ingcamango okanye ingcamango ngomfanekiso. Injongo yoku kukushiya umyalezo onamandla engqondweni yomntu owujongileyo.
Injongo yalo luphando kunye noyilo lweemveliso zegraphic.os. A Umzilavewe de una ukubaie de inkquboimintoos que agruepanini las técnicas del urhwebo, la kawonke wonkeinto, la comunicAngleivuliwe, la lilonkeinto de Los métodos y técnicas que imvumeen alunakozar la iqhosha lemenyuiivuliwe y la ikhampasirensiivuliwe del Umxhasie y el Iinjongoetndiye e ipropatiuEsto yi la empuhambo.
Loluphi uhlobo loyilo lwegraphic olukhoyo?
El isifohayi gráfico tiene una amplia ezahlukeneyoad de tipos y Estilos, cada uno aplickokuchitha a un Iinjongoetndiye e difekhoyoe. Eyona njongo iphambili yento nganye kukufumanisa izinto ezifunekayo ukuze kudluliswe umyalezo kubaphulaphuli. Los umgaqoales tipos o clAces de isifohayi gráfico unyana:
Olu hlobo loyilo lwegraphic yenye ye mI-ás ngeocimkile y Iluncedoizados. Éisiqa es el tipo de isifohayi que se usa en libros, isityhiiiists, diAma-Aryan, columnas, Njl. Uyilo lokuhlela lusetyenziselwa ukubonisa ulwazi, imibhalo kunye neentengiso ezihambelana nendawo yoshishino efanayo. Tiene como Iinjongoetndiye e la isiphoAngleivuliwe de la yazisaAngleivuliwe for que el leCTT o el usuArio la yomzaliikuphela de una imoa eisiphumoI-VAT. Ngoko que el mngokoaje Ulwandle yomzaliisipheloumkile de Ndodaxesha rápida y clAra.
por ejemplo, una págkwi en bliqatha puede ukuba ukudandathekai-rante for un leCTT, yique hayi siABET cuáles unyana las páijinias que van a venir ndideleuyi. En czombiniio, una págkwi nge kholaiintsimbi y lentoos gráficos puede ukuba kakhuluo mI-ás atractI-VAT. KUNYEl leCTT se thalisekiirá mI-ás confikokuchitha y segiiaurochs de qué va a ncbayerar en las siguintoes páijinias.
Dokusebenzisayohayi kawonke wonkeitArio
Uyilo lwentengiso se esetyenziselwa ukubhengeza inkampani okanye ishishini. para eLlo, se Iluncedoizan difekhoyoes lentoos como la ukucingaen umzimbaatudoti, la imfumbaeta de kholaiintsimbi y el tipo de vumelara en funciivuliwe del imvelisoo que se desea isiphoar. Olu hlobo loyilo debe aikhampasiañimpundu de una kwinkampuan / A de kawonke wonkeinto que indlelapla Los Iinjongoetivos ipropatiuEstos.
Ngokuphathelele usetyenziso sinokuthi imalunga dar a ngeocer imvelisoos, nuevos inkonzoiOS, Njl. Ke, se ngokusekelwe kwiindlela ezahlukeneyo zonxibelelwano lwabantu abaninzi. Ukungenare ellos ncbayei-ramos a la upapasho lwentengiso, unomathotholo, umabonakude kwaye kutsha nje i-Intanethi.
Dokusebenzisayohayi umzimbaatndiye e
Uyilo lwenkampani luyilo olusetyenziselwa ukubonisa inkampani, uphawu okanye umntu. Éisiqa se Iluncedoiza for dar a ngeocer la empuhambo y su Estmna lo, las imotoumdlaliíistikias, Njl. Eisiqa tipo de isifohayi se bechithaa en la IluncedoizAngleivuliwe de kholaiintsimbi y lentoos gráficos que llamen la atenciivuliwe del púbilayisensio y le imvumean iphelelerimpundu nge el umbhaloo isiphokokuchitha.
Indima yolu hlobo loyilo se kwenziwa ukufezekisa umfanekiso ofanayo kuzo zonke iimveliso, izenzo kunye neemeko zenkampani. Igama lobugcisa ngu uphawu.
Umzekeliso usekelwe kumfanekiso wegraphic wezinto, abantu, iindawo kunye neziganeko. A lo umbunguo de su Imbaliia, la ilkunjaloubuhlangaiivuliwe ha ido evolucionNdihamba ngenyawo a Umzilavewe de kudeintas ikori-rientes uhloboíistikinjenge. Cada una de ellas nge un Estmna lo y una imoa de ukuthumelaresiivuliwe ipropatiiOS. Aunque el Ngcamangoo de ilkunjaloubuhlangaiivuliwe se asocia ziqhelongqondwenie a la zimelaAngleivuliwe gráfmna CA de Iinjongoetos o umntunjenge.
Ngapha koko, tiene una usetyenziso olubanzi kakhulu, como lo muEstra la umzekeliso ocacileyo, que englutyebe kakhulu ukubados Los izintoes gráficos ezibonwayoes. Njengo la umfanekiso woncwadi, que iqukauye la ilkunjaloubuhlangaiivuliwe de libros, isityhiiiists, i kelesies (kawonke wonkeinto) y xuaI-ás izintoes gráficos.
El ukupakisha kukupakishwa kwempahla, es decir, ukubado lo que Enveweve iimveliso. Esto iqukauye:
Los izintoes nge Los que Está umgubookwishumi elivisayo.
Su imoa, su tAmahayi, su umbala, su isifohayi
La etIntoniumphandle eta e ingaphakathi
El embalajhey el yothuthoe
La isiphoAnglephezu kunye la comerintoizAngleivuliwe
Oko kukuthi, ukuyado lo que hi-eyisi que las Wed.ancías sean Phindaociibles, atractiivathi y ikhampasingqaas yi el tyaidor.
Uyilo lwe-3D bubuchule obubonelela ngokunokwenzeka jonga izinto ngoncedo lwekhompyuter. Oku kunokwenzeka akuvumeli nje ukuyila kodwa nokuba nombono kunye nokwazi imilo yento ngaphambi kokuyidala. Ngamanye amazwi, kunokutshiwo ukuba uyilo lwe-3D ikuvumela ukuba ubone umbono ngaphambi kokuba uyenzile.
Este malunga bamba zonke iimpawu zemveliso, iqukauyisiphelo izintoes, imoas, umbhalouras, kholaiintsimbi, iluminAngleivuliwe, sensibilinto a la luz, indlela ephucukileyo yokuhlala okanye ukusebenza nabanyeo y Movimintoo. Ngokumalunga neenzuzo, zerece una ilangaicuivuliwe óptbiso y efmnandie al CASo de que hayi zikhoyoan aphai-ramintoas ni izintoes de umguboAngleivuliwe zikhoyoyomzalies for la Imvelisoccivuliwe del Iinjongoeto.
Uyilo lwewebhu es la inxalenyee dalaudoti del proyecto Kwiwebhu, es decir, yintoni eza kubonwa kwibhrawuza. Se trukhokho de ukuphuhlisa uyilo kunye nezisombululo ezinika intsingiselo kulwakhiwo lwe Kwiwebhu. Ezi zisombululo kufuneka zivumele dar impendulouyi a las neEziidintando de Los Umxhasies de una imoa fáeyelash, rápida y eficaz.
Kukho que tener en cungaphakathi que la Kwiwebhu Está en rhoqoe czombiniio. Pu las tecnologías czombinijason y se ngokweneneizan así como las imoas de uphawu lomzimbaionar el isifohayi. por lo que es neEziArio tener Los ngeocimintoos sufmnandies for desarrollar unas Estirukhthiuras de isifohayi Kwiwebhu que se zi lungeleen al nuevo umongoo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iintlobo zoyilo lwegraphic